आजको न्युज सोमबार, १६ वैशाख २०७६
भनिन्छ, यो समाजका लागि नारी सबथोक हुन् । नारी भएको घर स्वर्गसरह हुन्छ । हो, यस्तै भनेर नारीलाई भ्रमपूर्ण समाजमा हुर्काइन्छ । नारीलाई समाजका लागि गहना मान्ने बहानामा समाजका हरेक कामकाजमा भेदभावका साथै पशु सोसरह व्यवहारमा हुर्काई बढाई पराईको घरमा जिम्मा लगाउने परम्परा हामी सबैको समाजमा छ ।
समानताका लागि भनेर आवाज मात्रै निकाल्ने हो कि विभिन्न किसिमबाट नारीलाई शोषण, हत्या र बलात्कार जस्ता जघन्य अपराध गर्ने जोसुकैलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने काम गर्न आवश्यक छ । समाजलाई रूपान्तरण गर्ने नारा र नारीका हकहितका निम्ति लगाइएका नारा खै कहाँ गए ? आज नारी आफ्नो घर परिवारबाट नै सुरक्षित छैनन् । विभिन्न किसिमका समाजका लागि घातक मागहरूबाट नै नारी ज्यूँदै जलिरहनुपरेको छ । किन मौन छ समाज ? कहिलेसम्म नारी जलेर खरानी हुनुपर्ने हो ? नारीलाई किन यस्तो विभिन्न बहानामा मार्न पछि परेको छैन यो समाज ?
हेर्दा मानव तर दानवको भन्दा निच व्यवहार गर्ने मानिसहरूप्रति आज सरकार र सरोकारवाला पक्ष के रमिता हेरेर बसिरहेका छन् ? नारीको कोमल हृदय त यो समाजले सधैँ दुखाउने गर्थ्यो गर्थ्यो तर झनै अब त शरीरमा आगो पनि लगाउन पछि किन पर्दैन ? किन निगरानी नगरेको यो सरकारले ?
नारीका बारे ठूलाठूला मञ्च खोजेर मीठा भाषण र पदका निम्ति कुर्सी खोसाखोस गर्नेहरू खै कता गए ? नारीमाथि यस्ता विभेद, शोषण र अन्याय हरेक पलपलमा भइरहेका छन् । तर किन जिम्मेवार व्यक्ति र निकाय मौन ? एउटा घटना सेलाउन नपाउँदै अर्को घटना भइरहेको छ । किन यस्तो घटनाप्रति खबरदारी गर्न नसकेको हो ?
नाराले मात्रै नारीको समस्याको हल हुँदैन, समाजका निच सोचहरूलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्न साथै अन्धविश्वासलाई परास्त गर्न सक्नुपर्छ । परापूर्वककालदेखि नै नारी बोक्सीको आरोपमा, दाइजोको आरोपमा, छाउपडी जस्ता विभिन्न किसिमका कुसंस्कारकै कारण बिनाकारण आफ्नै घरका परिवारबाट नै मृत्युको मुखमा पर्नुपरेको छ ।
गत बिहीबार बिहान सवा ९ बजे प्रहरीले सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिकाका- ८ मा २१ वर्षीया कञ्चन खत्वेको आफ्नै श्रीमान्‌ले नै शरीरमा आगो लगाए । उपचारको क्रममा उनको निधन भइसकेको छ । यस्तै, कैयौँ नारीले विभिन्न घरायसी समस्याका कारण साथै दाइजोको निहुँमा अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको छ ।
सतीले सरापेको देश भन्ने नेपाली उखान छ । अनेक कानुनी प्रावधान त छन् तर के गर्नु पानाहरू सजाउनका लागि मात्रै बनेका रहेछन् कानुनहरू । नारीले पहिला पनि यस्तै समाजका विकृतिका कारण बिनाकारण ज्यान गुमाउनुपर्थ्यो । आज २१औँ शताब्दीमा पनि त्यस्तै कुसंस्कारका कारण ज्यान बलि चढाइरहेका छन् ।
शासन गर्ने मानिस फेरिए । यो देशले महिला राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश पायो तर पनि नारीको आवाजलाई सुन्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति पाउन सकेन । अबका दिनमा पदलाई होइन, कर्मप्रति उत्तरदायी हुने नारीलाई यो समाजले पाओस् ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, १६ वैशाख २०७६
प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने मन्त्रीसँग स्वास्थ्य मन्त्रीको छलफल
कोराना संक्रमण : अमेरिकामा एकै दिन १ हजार ९ सयको मृत्यु
सांसद प्रभु साहले आफ्नो क्षेत्रका स्थानीय तहलाई दिए स्वास्थ्य सामग्री
प्रदेश १ : सीमामा गौडैपिच्छे सशस्त्रको अस्थायी पोस्ट
सुदूरपश्‍चिममा उच्च सतर्कता, डोटीमा छैन उल्लंघन
चन्द्रमामा देखियो फरक रङ, खगोल शास्त्री भन्छन् : दुर्लभ घटना